INorway iphelisa yonke imiqobo ye-COVID-19, ibuyela kubomi obuqhelekileyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iindaba » INorway iphelisa yonke imiqobo ye-COVID-19, ibuyela kubomi obuqhelekileyo
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Iindaba zaseNorway zokuPhula • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Isigqibo sikarhulumente sokususa imiqobo engqongqo ye-COVID-19 iza kwiintsuku ezingama-561 emva kokuba bezisiwe ukuqala ukucothisa ukusasazeka kwe-coronavirus, kunye nabasemagunyeni kwezempilo baseNorway bekwanika ukukhanya okuluhlaza kweminye imiqobo, enjengezo zikumabala ezemidlalo nakwezokuhamba ukuphela. kwiiveki ezizayo.
INorway "izakususa uninzi lwamanyathelo osulelo osulelayo," inike "umbulelo omkhulu" kubemi ngokuthobela.
Ngelixa amanyathelo eza kuphakanyiswa kwiiyure ezingama-24 ezizayo, iNkulumbuso yaseNorway ibongoze amashishini ukuba angaqali ukulungiselela abathengi ukuba babuye kude kube ngomso.
Nangona kunjalo, igosa laseNorway libongoze abemi abafanelekileyo ukuba baqinisekise ukuba bagonyiwe ngokupheleleyo, bechaza ukuba "ngumsebenzi wabo woluntu".
INorway izakuvula ngokupheleleyo ngoMgqibelo, nge-25 kaSeptemba, iphelise izithintelo ze-COVID-19 kumashishini kunye nokunxibelelana kwezentlalo, iNkulumbuso yelizwe ibhengeze namhlanje.
Inkulumbuso yaseNorway u-Erna Solberg
"Ngoku sibuyela kubomi obuqhelekileyo bemihla ngemihla," iNkulumbuso yaseNorway u-Erna Solberg ubhengeze, ngelixa wayethetha kwinkomfa noonondaba ngokusemthethweni namhlanje.
Namhlanje, uSolberg uqinisekisile ukuba, ukusuka ngentsimbi yesine (4pm GMT) ngomso (ngoMgqibelo, nge-3 Septemba), Norowe "izakususa uninzi lwamanyathelo osulelo osulelayo," inike "umbulelo omkhulu" kubemi ngokuthobela.
Ngelixa amanyathelo eza kuphakanyiswa kwiiyure ezingama-24 ezizayo, iNkulumbuso yaseNorway ibongoze amashishini ukuba angaqali ukulungiselela abathengi ukuba babuye kude kube ngomso, njengoko imigaqo isekhona kude kube lixesha "eliqhelekileyo" ekuvunyelwene ngalo.
Nangona amagosa aseNorway aziva ekhululekile ngokwaneleyo ukuba angaqala ukuvula ilizwe kwakhona, igosa libongoze abemi abafanelekileyo ukuba baqinisekise ukuba bagonyiwe ngokupheleleyo, bechaza ukuba "ngumsebenzi wabo woluntu" kwaye bakhupha isibongozo "kuluntu oluncinci" olungekabikho jab.
Ephendula kwesi sibhengezo, intloko ye-Confederation of Norwegian Enterprise, u-Ole Erik Almlid, wabhengeza ukuba le yinto "uluntu lonke beluyilangazelela," nangona "intambo ingekafikelelwa," ngomsebenzi omninzi ozayo de amashishini abuyele ngokupheleleyo.
Novemba 23, 2021 kwi-06: 01
Ngoku lifikile ixesha lokubuyela kubomi obuqhelekileyo bemihla ngemihla, ”iNkulumbuso engama-76% yabo bonke abantu baseNorway ngoku bafumene idosi enye ye-COVID-19. Amazwe amaninzi asandula ukuchaza amanani amatyala emihla ngemihla arekhodiweyo aphezulu. Imiboniso kunye nezidubedube.